दुनियाँकै अनौठो : प्रेमीकासँग ३ दिन, श्रीमतीसँग ३ दिन बस्ने र १ दिन छुट्टी पाउनेगरी श्रीमान भागबण्डा ! « गोर्खाली खबर डटकम
दुनियाँकै अनौठो : प्रेमीकासँग ३ दिन, श्रीमतीसँग ३ दिन बस्ने र १ दिन छुट्टी पाउनेगरी श्रीमान भागबण्डा !
काठमाडौं । नेपालीमा २ जोईको पोई कुना बसि रोई भन्ने उखान खुबै प्रचलनमा छ । तर मिलाउन सक्ने हो भने कुना बसेर रोईराख्नु पर्दैन । यस्तै एक घटना भारतको झारखण्डको राजधानीबाट आएको छ । यहाँ राँचीको सदर पुलिस थानामा शनिबार एउटा निकै अचम्मको घटना भयो । श्रीमती र प्रेमिकाले एक व्यक्तिलाई आफूसँग बस्नका लागि आपसमा बाँडफाँड गरेका छन् ।
१० जना कैदि जेलको छत फोड्न सफल, तर भाग्नै लाग्दा १ जना साथी प्वालमा अड्कीएर चिच्याउन थालेपछि मच्चियो हंगामा